Oxygen Cocktail - kuyini? Siye sezwa ngalokhu icebo. Kodwa bangase bangaqondi ukuthi zonke ngokugcwele. Kufanele uchaze izakhiwo emihle nemibi lesi siphuzo.
Oxygen Cocktail: kuyini?
Lena isiphuzo ewusizo, okuyinto ngokucebile ayegcwele umoya-mpilo. Njengomthetho, ekuwulungiseleleni, izithasiselo ehlukahlukene, ezenza kube ezihlwabusayo kakhulu.
Isikhathi esining impela lokhu isiphuzo kungenzeka kuphethwe odokotela lezo zifo umoya-mpilo yokulamba komzimba. Ingabe kuyiqiniso ukuthi le ndlela iphumelela kakhulu?
Ingabe kungenzeka, futhi uma kunjalo, indlela yokwenza i-oksijini cocktail ekhaya? Awudingi imishini ebizayo kanye okukhulu kakhulu.
Yasungulwa le cocktail kwaba ngo-yalolucwaningo 60 XX leminyaka ekuhloleni umthelela ososayensi elihlanzekile 99% i-oksijini (impilo) ku pheshana emathunjini. Ngakho, le nqubo kwaba ukuthi indoda okuthiwa gavage-mpilo Foam (mayelana 2 amalitha). Futhi imiphumela yaba ezinhle. Thina waloba ekwenteni ncono iziguli.
Njengoba inqubo, naphezu umphumela ezingemnandi kakhulu, NN Sirotinin yasungulwa umoya-mpilo cocktail. Yena eyathandwa kakhulu kule sanatoriums kweSoviet Union, kodwa ayebiza kakhulu, okwenza ithuba zama ukubona ngamehlo engqondo umphumela ngiphuze itholakala kuphela iziguli ocebile.
Intuthuko kwezobuchwepheshe anda ukutholakala cocktail emva kweminyaka 10 kuphela, kodwa udumo lwakhe liye lehla, isiphuzo uye usiphathe ukhohlwe. Namuhla, isidingo futhi luye lwaqinisa futhi.
Yini ilungiselela-mpilo cocktail
I cocktail wokuqala owenziwe kusukela amaqanda qanda, ngesiswebhu kahle. Taste kwakungekhona emnandi kunazo zonke (njengombiko amaqanda aluhlaza), kanye Foam isheshe ixazululwe. Ngakho-ke, lo mkhiqizo kufakwa licorice impande. Ngokuhlanganisa ne berry ehlukahlukene izithelo Syrups, amavithamini, nokwelashwa baye kuba mnandi.
Namuhla nenye i-oksijini cocktail ingase ihlanganise licorice noma licorice impande, amaqanda qanda noma isixazululo gelatin. Ngamunye izithako luyisisekelo cocktail, kodwa kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe licorice impande.
Amathuluzi okwelapha zidayiswa cocktail egcwele umoya-mpilo zezokwelapha amasilinda, isisekelo kungaba ubisi, izithelo isiraphu, ujusi, decoction herbal ngisho amanzi - nalelo ukunambitheka.
Leli bhizinisi buyaqhubeka umfutho. Ayathanda hhayi kuphela Pharmacy kanye nezikhungo zezempilo, kodwa futhi ezinkulu, zezitolo, amathilomu.
Bayanda, ungathola okuthiwa Oxy-Amabha ukuthi ngokukhethekile kuphela isiphuzo njengenhlangano cocktail-mpilo. intengo yayo nezikhungo zezokwelapha nxazonke 50 ruble ngayinye isigamu-litre ingilazi. Ngokuqondene nezinye izikhungo, izindleko zizoba ruble 60-70 nangaphezulu.
Kuyinto kulezi nemishayo, indlela elula uzame i cocktail oksijini, ukuthi kuyini, kungaba esihlwabusayo futhi ewusizo ngangokunokwenzeka ukubuza bartenders.
Kukhona ngisho esigatshaneni olukhethekile imithi - yokwelapha i-oksijini. Ososayensi (nabalandela mkhuba) zithi engayitholi njalo lokhu isiphuzo Kusizuzisa kakhulu emzimbeni womuntu.
Indlela ewusizo-mpilo cocktail? Ngaphezu kwakho konke, ngcono ukungatheleleki ekulinganiseni umzimba, ukusebenza ngendlela ephawulekayo ngcono futhi neutralized izimpawu of hypoxia (yokushodelwa umoya egazini). Futhi ngaphezu amavithamini nokubunjwa kwenza kube usizo nakakhulu.
Ucwaningo lubonisa ukuthi kokuba wangena pheshana emathunjini, umoya-mpilo ngokushesha angena egazini. Ngakho, it is matasa ngokushesha okungaka, manjalo kuphenduke amandla ekhuthaza ngokuyinhloko izinqubo umzimba emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, lezi cocktail Kunconywa ukusebenzisa abadlali, abesifazane abakhulelwe, izingane kanye nabantu buthaka omzimba. Izakhamuzi imizi emikhulu imvelo abampofu futhi ngokushesha uzizwe ngcono isimo sakhe. I cocktail-mpilo kuyasiza kubo? Kufana umoya oqabulayo edolobheni ezinothuli.
Lokhu kungaba isiphuzo eziyingozi oksigenovy
Yiqiniso, abantu abaningi emhlabeni ngubani-mpilo cocktail kungaletha umonakalo. Ngakho-ke, ngaphambi kokufunda indlela yokwenza i-oksijini cocktail ekhaya, kumelwe ucacise ukuthi awazi awela isigaba sabantu okuthiwa kuso contraindicated.
Izinzuzo ngeke umuntu yokungezwani komzimba okungenani eyodwa ingxenye. Ungacabangi mayelana cocktail oksijini, ukuthi kuyinto elinguzifozonke, ngakho ukusabela iguliswa ngeke kwenzeke.
Abantu abanale ukuhlaselwa yesifuba somoya acute, kukhona nezifo zokuphefumula futhi ngeke uzizwe izakhiwo ewusizo. Ezimweni ezinjalo, akukuhle ukuba izame ngisho nokuzama. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa isiphuzo kungaba yingozi.
Iphinde Izimo zihlanganisa izifo ezifana komzimba okukhulu, ukudakwa (ubuthi), izilonda esiswini, ukuvuvukala emathunjini, isifo sikashukela kanye amatshe atholakala enyongweni.
Indlela yokwenza i-oksijini cocktail ekhaya
Ukupheka utshwala kungenzeka ngezindlela ezimbili: lobuchwepheshe (i-oksijini kokteyler kanye mixer) noma ngesandla (nge aerator tube noma yemvelo yesivini ejenti).
izindlela Technical, njengoba umthetho, ezincane ezisetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene tikhungo tetenhlalo: izikole, izinkulisa, izikhungo zezempilo kanye nokungcebeleka izikhungo, kanye Oxy-Amabha engxenyeni ezimele. igwebu, elicinene futhi obukhulu Nge imishini enjalo. Fillers esetshenziswa zihlukile.
Kuwufanele ukwazi le mithetho elandelayo:
Juice noma isiraphu lokushisa kufanele kube lokushisa lasendlini;
Ungacindezeli isilinda valve ekupheleni, ukuncipha komoya-mpilo Kumelwe aphume kancane, ukwakha Foam obukhulu;
I isiraphu kufanele buhlanjululwe ngamanzi endaweni isilinganiso 3 kuya ku-1 ;
Cocktail kudingeka udle isipuni futhi kancane kancane;
Ayo nge uginindela, noma iziphuzo ezibandayo ekhaya cocktail ezingafanele.
Indlela baphuze-mpilo cocktail
Kungcono ukuwaphuza 1.5 amahora ngaphambi kokudla, ngisho noma kuyinto kwasemini isikhathi. Uma ngaphambi kokudla ukuphuza cocktail ukhohlwe ke ngizodabula 2 amahora ngemva kokudla. Lokhu isiphuzo ukudla ngesipuni cishe imizuzu engu-5. Izazi zokudla zitusa ukuba bangalisebenzisi kabi umkhiqizo futhi ukudla (isiphuzo) akukho servings engaphezu kwemibili ngosuku. Cocktails kuwufanele ukuthatha izinsuku ezingu-15 noma ngaphansi. Kuyadingeka ukuba bonana nodokotela wakho kuqala. Nento eyodwa ngaphezulu odinga ukukwazi mayelana umoya-mpilo-cocktail, awukwazi ukuwaphuza ngokusebenzisa straw, ngoba kungaba bashise nolwelwesi emphinjeni futhi lwamafinyila.
Yini Oxy-cocktail ingalungiswa?
Recipe-mpilo cocktail tonic. Yenza 1-1.5 amalitha amanzi 10 gr. Helichrysum utshani 50 g. rosehip. Sinikeza it yenza amahora 5-6. Ngaphezu kwalokho, ukumnika is elicwengekileyo futhi 100 ml we iliquorice. Ingxube kwaphumela ungeze berry noma izithelo isiraphu uma bebona kunesidingo yakho, isib, sitrobheli. Thela i kokteyler umoya-mpilo bese upheka ngokulandela imiyalelo kumshini.
cocktail anti-inflammatory. Ngo 1 litre amanzi engeza 1 isipuni calendulakuva tincture futhi 1 isipuni chamomile ukumnika. Ingakapheli imizuzu engu-30-40, nika ukuma ke ukulungiselela isiphuzo kokteylere.
Izithelo ubisi Oxy-isiphuzo "Apple Pie". Thatha 60 ml apple juice, 130 ml ubisi bese wengeza 7 amagremu vanilla-mpilo ingxube. Ungengeza futhi ingcosana encane isinamoni uma uthanda. Ingxube kwaphumela kumele bazogcwalisa ne-oksijini cocktail ngomumo.
Yini okufanele ibe ingcindezi ezinganeni? Umfutho wegazi: evamile-at-yobudala ithebula
MRI ebonisa ukuthi okhalo? MRI kwezitho okhalo: izindleko ukuqeqeshwa